रामचन्द्र पौडेल १५-१६ पटक झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बनेको मान्छे। केपी ओली को अहिले ५-६ पटक मात्र भा छ। ९-१० पटक अझ उ झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्छ।
नेपालमा गरीबीले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको कि राजनीतिक अस्थिरता ले ग़रीबी ल्याएको?
रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई नपुगेको हो?
KP Oli Nepal Prime Minister prime minister of nepal ram chandra paudel